जसले प्रकृतिको नियम पालना गर्छ ऊ निरोगी रहन्छ Nepalpatra जसले प्रकृतिको नियम पालना गर्छ ऊ निरोगी रहन्छ
रोग लाग्नुका प्रमुख कारण भनेको वाथ पित्त र कफ प्रधान हुन् । यदि हामीले निम्न अनुसारको नियम पालन गर्छौं भने तिनै दोष हाम्रो शरीरबाट हट्ने छन् र शरीरमा कुनै पनि रोग लाग्ने छैन ।
१. खाना खाने वित्तिकै पानी कदापि पिउनु हुँदैन । यसले पाचन तन्त्रलाई खराब गराउदछ । खाना हजम हुनको लागि हाम्रो शरीरमा जठर अग्नि आवश्यक हुन्छ । खानासाथ पानी पिउदा यो अग्नि निभ्न जानाले खाएको खाना पच्दैन यसबाट ८० प्रकारको रोग लाग्ने हुन्छ । यो नियम पालना गर्नाले ८० प्रकारका रोगबाट हामी बच्न सक्नेछौं ।
२. पानी पिउदा गटगट नभई घुट घुट पिउनुपर्छ । यो प्रकृतिको नियम हो । यदि हामीले यो नियम पालन गर्छौं भने हाम्रो मुखमा भएको क्षार क्रमश: बगेर पेटमा भएको एसिडसंग मिल्नाले खाएको खाना चाँडो हजम हुने गर्दछ । यसरी हजम भए पेट सम्बन्धित सम्पूर्ण रोग नाश हुनेछ ।
३. प्यास लागेमा तुरुन्त फ्रिजको पानी सकेसम्म पिउनु हुदैन । यसले शरीर चिसो बनाउदछ । कहिलेकाही यसले स्वास्थ्यमा नकरात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
४. सुतेर उठनासाथ घुटघुट कम्तिमा ४ गिलास पानी पिउनुपर्छ । यसले आन्द्रालाई सफाई गर्ने काम गर्दछ । दिसा खुलस्त हुनाले पेट सफा भई शरिर हल्का हुन्छ । पाचनतन्त्र सवल हुनाले खाएको पाचन हुन्छ विविध रोग लाग्नबाट बचाउदछ ।
आज हरेक मानिसले प्राकृतिक नियम पालना नगर्दा विविध रोगको चपेटामा आइरहेका छन् । अनावश्यक औषधिको सेवनले नयाँ-नयाँ रोग उत्पत्ति हुनाले मानिस रोगको दलदलमा फस्दै गएको छ । यदि शरीर निरोग भए कुनैपनि रोग नलाग्ने हुन्छ ।